Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ku Guuleysatay Doorashadii Kamukunji | SAHAN ONLINE
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ku Guuleysatay Doorashadii Kamukunji
NAIROBI – Xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ku guuleystay doorashadii is reed reebka deegaanka Kamakunji ee xisbiga Jubilee,wuxuu ka adkaaday mudanihii hore ee deegaanka Kamukunji Simon Mbugua.
Raphael Tuju oo ah Xoghayaha guud ee Jubilee ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada,wuxuu sheegay in Yuusuf Xasan uu ku guuleystay doorashadii xisbiga isla markaana doorashada guud u matali doono xisbiga Jubilee ee Madaxweyne Kenyatta.
Deegaanka Kamukunji waa deefaanka ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee Soomaalida ay degto.
Xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ka hadlay dareenkiisa kadib markii uu helay Tikitkiisa musharaxnimo ee xisbiga Jubilee ayaa shaaca ka qaaday in uu sii wadi doono horumarka deegaanka Kamukunji ee isaga laga soo doorto.
Wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in uu si weyn ugu guuleyso doono doorashooyinka guud ee bisha August 2017ka ka dhici doona dalka Kenya.
Waa markii saddexaad uu ku guuleysto tartanta deegaanka Kamakunji ,wuxuuna si weyn u bogaadiyey taageerayaashiisa oo uu sheegay in ay si weyn usoo baxeen toddobaadkii tagey oo la qabtay doorashooyinkii horudhaca ahaa.